Waxgaradka M/ Cadaado oo go’aan ka qaatay Imaanshaha Madaxweyne Xaaf – XAMAR POST
By Zakariye iiman On Jun 24, 2019
Kulan ay Maanta ku yeesheen Magalada Cadaado ee gobolka Galgaduud Waxgaradka iyo Odayaasha Dhaqanka ee Magalada Cadaado ayaa waxaa ay kaga hadleen isbedelka ka dhacay Galmudug iyo imaanshaha Madaxweyne Xaaf ee Magalada Cadaado.
Kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxa wararka la helayo ay sheegayaan in Odayaasha iyo waxgaradka Cadaado ay isku raaceen in Magalada lagu soo dhaweeyo Madaxweyne Xaaf oo haatan ku sugan deegaanka Godinlabe.
Waxaa ay qaarkood sheegeen in Madaxweyne Xaaf uu la soo xiriiray si uu dib ugu soo laabto Magalada Cadaado oo in ka badan sanad uu ka maqnaa,isla markaana fariisin u aheyd Magalada Dhuusamareeb ee isla gobolka Galgaduud.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa Magalada Cadaado uga maqnaa khilaaf kala dhaxeeyay Dowladda Federaalka,hayeeshee ugu dambeyn markale uu dib ugu soo laabtay, kadib markii ay is khilaafeen Maamulkii Gobolada Dhexe ee Ahlusunna balse ku biiray Maamulka Galmudug.
Booliska Kenya oo ka digay weerarro Al-shabab ka qorsheynayaan gudaha dalkooda